Orodyahan reer Kenya oo lug laga jaray - BBC Somali
Orodyahan reer Kenya oo lug laga jaray
22 Nofembar 2011
Image caption Ciyaaraha fudud ee Kenya
Orodyahan reer Kenya ah oo ka qayb gala orodada dhaadheer oo muddo labo maalmood ka badan ku lunsanaa duufaanno baraf ah oo ka dhacay gobolka Alaska ee waddanka Maraykanka ayaa lugtiisa laga jaray meel in yar ka sarreysa anqawga.
Markii uu Marko Cheseto oo u orday Jaamacadda Alaska uu lumay ma uusan xirnayn wax dhar ah oo qabowga ka celiya. Markii la soo helay sagaalkii bishan November waxaa uu ahaa mid barafoobay oo cagaha iyo gacmuhuna qallaleen. Saraakiil jaamacadda ka tirsan waxay sheegeen in la filayo in gacmihiisu si buuxda u bogsadaan.
Jaamacaddu waxay sheegtay in Mr Cheseto oo baranayay kalkaaliye caafimaad iyo quudinta uu muddo ku sii jiri doono isbitaalka. Orodyahanku waxaa uu yiri anigoo weli ka soo kabanaya dhibkii igu dhacay jir ahaan iyo dareen ahaanba, waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda iyo mutadawiciintii baadigoobkeyga ka qayb galay, waxaana aan ku dadaali doonaa inaan u abaalgudo bulshadii aadka ii caawintay iyo dalka aan u dhashay ee Kenya.
Markii la soo helay waxaa la sheegay in koox caafimaadka ah ay lugihiisa ka saari waayeen kabihii sport-ga ee uu gashanaa oo jirkiisa ku qallalay. Intii uu jaamacaddaas ku jiray, Mr Cheseto, waxaa uu dhigay waqti cusub oo uu ku sameeyay orodka nus maaratoonka ee magaalada jaamacadda ka dhacay sanadkii 2010, waxaana uu ku guulaystay dhowr jeer oroddo ay ka qayb galeen dhammaan ardayda jaamacadaha Maraykanka.